'दीपिका पादुकोण' बलिउडमा सर्वाधिक कमाउने नायिका !
‘दीपिका पादुकोण’ बलिउडमा सर्वाधिक कमाउने नायिका !
पुस २३, विराटनगर
चर्चित म्यागजिन फोब्र्सले निकालेको सुचिमा २०१७ मा बलिउडका धनी सिनेकर्मीहरुमध्ये दीपिका पादुकोण छैटौं स्थानमा र बलिउड अभिनित्रिहरुमध्ये पहिलो स्थानमा परेकी छन् । गत शुक्रबारबाट मात्र ३२ वर्षमा लागेकी अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले २०१७ मा ११ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको फोब्र्सले उल्लेख गरेको छ । यससँगै उनि यतिबेला बलिउडकै सर्वाधिक कमाउने अभिनेत्रीका साथै सबैभन्दा महँगी बलिउड अभिनेत्रीका रूपमा पनि परिचित छिन् ।
चर्चित हलिउड अभिनिता भेन डिजेलसँग हलिउड चलचित्र ‘ट्रिपल एक्स’मा समेत काम गरिसकेकी पादुकोणले पहिलोपटक सन् २००६ मा कान्नडा चलचित्र ‘ऐश्वर्य’बाट सानो भुमिकामा अभिनय गरेर सिनेक्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् भने बलिउडमा उनले सन् २००७ मा शाहरुख खानसँगको चलचित्र ‘ओम शान्ति ओम’ बाट डेब्यु गरेकी हुन् । उनको यो डेब्यु चलचित्र नै त्यतिबेला १०० करोड माथिको व्यापार गर्दै सुपरहिट भएको थियो । पहिलो चलचित्र नै बल्कबस्टर भएपछि उनले यसै चलचित्रबाट फिल्म फेयर अवार्डमा ‘बेस्ट फिमेल डेब्ट’को अवार्ड पनि जितेकी थिइन् ।
यसरि दीपिका अभिनित डेब्यु चलचित्र नै सुपरहिट भएपछि उनको बलिवुड यात्रा सहजै बन्यो । त्यसपछि उनले अभिनय गरेकी चलचित्र देशी ब्योज़, रेश–२, बाजीराव मस्तानी, पिकु, चेन्नई एक्सप्रेस, ह्याप्पी न्यु इयर, गोलियोंकी रासलीला–रामलीला, ए जवानी है दिवानी लगायतका चलचित्रहरु सुपरहिट र व्यावसायिक रुपमा सफल चलचित्रहरु हुन् । शाहरूख खानसँग अभिनय गरेमध्ये दीपिकाको सर्वाधिक कमाइ गर्ने चलचित्र ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ हो, यो चलचित्रले लगभग ४०० करोडको व्यापार गरेको थियो ।
गत एक दशकको अभिनय यात्रामा बलिउडकी सर्वाधिक हिट र व्यावसायिक रूपमा सफल चलचित्र दिने नायिकाका रूपमा सु-परिचित दीपिका अभिनित अब आउन लागेको नयाँ चलचित्र ‘पद्मावती’ हो । तर ‘पद्मावती’ बलिउडमा यो वर्षकै सर्वाधिक विवादमा परेको चलचित्र भएको छ । विवादका कारण यो चलचित्रको रिलिज डेट यकिनको साथ भने हालसम्म पनि आउन सकेको छैन । तर, जब ‘पद्मावती’ रिलिज हुन्छ तब यो सुपरहिट हुनेमा त दीपिका विश्वस्त नै छिन् यसले चलचित्रको सबै रेकर्डहरु तोड्न सक्ने पनि उनको विश्वास रहेको छ ।